Asikelwa elinonile amashende | Isolezwe
Asikelwa elinonile amashende
Isolezwe / 20 December 2012, 12:39pm /
OMAKHWAPHENI bathola izipho ezibizayo ngoba amadoda ashadile encamela ukuchitha imali kubo kunokuthi athengele amakhosikazi awo izipho.	Isithombe: MOTLHALEFI MAHLABE
UKHISIMUSI isikhathi sokuphana, ucwaningo lwakamuva luveza ukuthi omakhwapheni yibona abathola izipho eziphambili kulesi sikhathi uma kuqhathaniswa namakhosikazi.
Lokhu kuvezwe wucwaningo lwe-website i-Ashleymadison.com ehlanganisa abantu abafuna izithandwa ku-internet.
Ngokocwaningo lwale website enamalungu angu-5 475 aseNingizimu Afrika, abesilisa abashadelwe bathengela omakhwapheni izipho ezibizayo kuthi amakhosikazi abo bawathengele izipho ezingabizi kakhulu noma lezo ezizosetshenziswa ngumndeni wonke.
Abantu abakade beyingxenye yalolu cwaningo ngamadoda ashadile anomakhwapheni.
Athi athengela amakhosikazi awo izipho zobuchwepheshe besimanje azozisebenzisa unyaka wonke okubalwa kuzo ama-iPads noma amavawusha okuyobhucungwa e-spa.
Izinqandamathe kolunye uhlangothi zithengelwa ubucwebe, izingubo zangaphansi ezihehayo neziqholo ezibizayo.
U-26% wabesilisa bavumile ukuthi uncamela ukuthengela intombi ubucwebe obubizayo kunokuthengela amakhosikazi.
Ngokusho kwezintokazi ezingomakhwapheni kodwa ezingathandi ukuba kudalulwe amagama azo ephephandabeni, amadoda ashadile athenga izipho ezibizayo ukuze intombi ingakhali kakhulu ngesikhathi owesilisa asichitha nonkosikazi wakhe.
Lolu cwaningo luphinde luveze ukuthi omakhwapheni bathengelwa ubucwebe bamadayimane, igolide nesiliva obukhokhelwa ukheshi ukuze kungabikhona iziliphu ezizoba wubufakazi nezingagcina sezigaxelisa owesilisa aze abanjwe ukuthi unomakhwapheni.
Amadoda amaningi athe awajabule njengoba kuyisikhathi samaholidi ngoba asezohlala namakhosikazi isikhathi esiningi esikhundleni somakhwapheni abahlale benothando nesineke.
U-32% wamadoda uveze ukuthi uzopulukutsha ngosuku lukaKhisimusi ukuyochitha amahora ambalwa nomakhwapheni babo.
Ngokusho kukaNoel Biderman ongumsunguli we-Ashleymadison.com, amadoda amaningi ayawuzonda uKhisimusi namaholidi ngoba kusho ukuthi awasitholi isikhathi esenele sokuba nomakhwapheni.